တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ် တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. ကြေးစားတစ်ခုဖြစ်တယ် တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ် နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan။ မည်သည့်အရေအတွက်ကကြိုဆိုနေပါတယ်။ ရန်လိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစျေးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်း OEM, နှစ်ဖွဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ။ ခိုင်နောက်ခံအရောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနား BRAND ဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ သင်ကြိုးစားဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-သံမဏိ,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၅၇ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၂.၂ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၄ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၆ ကီလိုဂရမ် ထိပ်တွင်ချစ်စရာလိပ်ရုပ်ငယ်လေးနှင့်ပန်းရောင်အဖုံး–စိတ်ဝင်စားစရာပါ&နှစ်သက်ဖွယ်ဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်.လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်